Umkhiqizi We-Best Drawing Die neFektri | Toonney
Isitshalo seToonney tungsten Carbide singumkhiqizi oholayo wemikhiqizo ye-tungsten carbide alloy. Ingxubevange yeTungsten uhlobo lwengxubevange enezakhi ezithile zensimbi, phakathi kwayo okuyi-tungsten okuyiyona nto ebalulekile. Kuzo zonke izinto zensimbi, i-tungsten inephuzu lokuncibilika eliphakeme kakhulu, izinga lokushisa eliphakeme, amandla nokumelana okukhanyayo, ukuqhuba okushisayo nokusebenza okuhle kokukhishwa kwe-electron. I-Tungsten isetshenziselwa kabanzi ukukhiqiza i-carbide enamatende kanye ne-tungsten alloy. Ingxubevange ye-Tungsten isetshenziswa kakhulu ku-elekthronikhi, embonini yomthombo wokukhanya kagesi, naku-Aerospace, ukusakaza, izikhali, njll. Ngemuva kokucubungula okunengqondo, ingxubevange ye-tungsten ingacutshungulwa ibe yinto enhle. Ngokuthuthuka kwe-tungsten alloy, inhlangano yayo, amandla we-tensile, ne-plastic - brittle ingathuthukiswa kakhulu.
Isingeniso seDraw Die
Isitshalo seToonney tungsten Carbide singumkhiqizi oholayo wemikhiqizo ye-tungsten carbide alloy. Ingxubevange yeTungsten uhlobo lwengxubevange enezakhi ezithile zensimbi, phakathi kwayo okuyi-tungsten okuyiyona nto ebalulekile. Kuzo zonke izinto zensimbi, i-tungsten inephuzu lokuncibilika eliphakeme kakhulu, izinga lokushisa eliphakeme, amandla nokumelana okukhanyayo, ukuqhuba okushisayo nokusebenza okuhle kokukhishwa kwe-electron. I-Tungsten isetshenziselwa kabanzi ukukhiqiza i-carbide enamatende kanye ne-tungsten alloy. Ingxubevange ye-Tungsten isetshenziswa kakhulu ku-elekthronikhi, embonini yomthombo wokukhanya kagesi, naku-Aerospace, ukusakaza, izikhali, njll. Ngemuva kokucubungula okunengqondo, ingxubevange ye-tungsten ingacutshungulwa ibe yinto enhle. Ngokuthuthuka kwe-tungsten alloy, inhlangano yayo, amandla we-tensile, ne-plastic - brittle ingathuthukiswa kakhulu. Isitshalo se-Toonney tungsten alloy sisebenzisa i-tungsten alloy emsulwa ekukhiqizeni ikhwalithi ephezulu ye-carbide, ukucacisa okufayo nokudweba. Ngakho-ke isitshalo se-Toonney tungsten alloy sithola ukuvunywa okuthe xaxa kumakhasimende nakwezinye izinhlangano zomhlaba. Isitshalo se-Toonney tungsten alloy sisedolobheni elisogwini iXiamen, esifundazweni saseChina eFujian. Ingxubevange yeToonney tungsten imboza cishe i-8000M2 ngokuphelele kwizitezi ezintathu, kanti isitshalo seToonney tungsten alloy sinolayini wakamuva wokukhiqiza ukuze kutholakale / kuqedwe i-tungsten carbide alloy rod / die / bar kusuka ku-tungsten carbide powder.
Ukudweba kufa ngokuvamile kubhekisela enhlobonhlobo yokulawula isikhunta se-wire, kanye ne-optical fiber drawing die. Yonke indawo yokufa yomdwebo inembobo ethile yomumo, efana nxazonke, isikwele, i-octagon, noma obunye ubungako obukhethekile.Usayizi wensimbi uzoba mncane lapho udonswa emgodini wokufa womdwebo. Ngesinye isikhathi ngisho nokuma kuzoshintsha. I-Drawing die isetshenziswa kabanzi ezimbonini ezahlukahlukene, njenge-elekthronikhi, i-radar, i-TV, izinsimbi, kanye nomkhakha we-spaceflight. Ukudweba okufayo isikhunta esibaluleke kakhulu esisebenzisekayo kuzo zonke izinhlobo zabakhiqizi bezinsimbi zensimbi, njengefekthri yocingo nentambo, imisebenzi yocingo, ifektri yocingo lwe-electrode njalonjalo. Wire Umdwebo die has a ububanzi ebanzi isicelo, ikakhulukazi ibha umdwebo, wire induku, ucingo, ipayipi nezinye komugqa kunzima ukucubungula. Ukudweba okufayo kulungele ukucubungula umdwebo wensimbi, ithusi, i-tungsten, i-molybdenum, ne-tungsten alloy material. Izindleko zokufa komdwebo zibalwa cishe nge-1/2 yezindleko zokudweba ngocingo. Ngakho-ke, ukwehlisa kanjani izindleko zokudweba nokuthuthukisa impilo yesevisi yokudweba die kuyinkinga ephuthumayo okufanele ixazululwe. Isitshalo seToonney esidonsa isitshalo sithuthukise izikhala ezisezingeni eliphakeme ze-tungsten carbide zezimboni zokudweba ngocingo futhi futhi ne-tungsten carbide drawing die ingatholakala ku-Toonney.
Umkhiqizi weToonney carbide ushonile ngokukhethekile ekufeni nokukhiqiza iminyaka engaphezu kwemihlanu. I-Carbide iyafa futhi ifile i-carbide ekhiqizwa yi-Toonney carbide ifa umkhiqizi unobulukhuni obuphakeme, amandla aphezulu, ukumelana nokugqwala, ukumelana nokushisa okuphezulu kanye ne-coefficient yokwanda okuphansi. Impilo yesevisi ye-carbide ifa yinde kakhulu kunokuphila kwensimbi. Umkhiqizi weToonney carbide ufa uzimisele ukunikela ngemininingwane eminingi ngokufa kwe-carbide. Siyakwamukela Toonney carbide uyafa nomkhiqizi.
Impilo yesevisi yokufa ngokunemba iyisithiyo esikhulu sokukhuthaza ngamandla amandla obuchwepheshe obusha bokuvala kahle. Esinye sezizathu eziyinhloko ukuthi okokusebenza ngokunemba kufa akulungile futhi inqubo yokwelashwa kokushisa ayiphelele. Isitshalo sokufa seToonney sizinikela ekutadisheni isimo samanje sokunemba sife ekhaya nakwamanye amazwe. Ukufunda kokuhlangenwe nakho okuthuthukile kwamanye amazwe, ikakhulukazi okuhlangenwe nakho komkhiqizi wokufa weSwitzerland Feintool AG Lyss, uToonney usungule amamaki we-tungsten carbide RKG, XK, RVA, RST, G series grade tungsten carbide wokusetshenziswa okuhlukile kokudweba, khetha amamaki afanele kakhulu ukusetshenziswa okukhethekile kuzokusiza ukuthi uthole ukusebenza okuhle kakhulu futhi wandise isikhathi sempilo yomdwebo wakho. Ngaphandle kokwakhiwa kwefomethi ye-tungsten carbide material, uToonney futhi wandisa isikhathi sokuphila kwabantu ngokufa ngodwendwe olukhethekile olunjenge-HIP low-pressure sintering ukuthola ubunzima obungcono be-carbide.
Ngegama elilodwa, ifektri ye-Toonney precision die ithola isisombululo esihle sokukhethwa kwempahla nokwelashwa kokushisa kwe-die die. Uma ufuna ukwazi okuningi ngokunemba ufe, sicela ukhululeke ukuxhumana nathi!
Izibonelo Zesampula: ukudweba kufa, i-carbide iyafa nokunemba okungatholakala okutholakala kuhlu lwethu oluvamile olujwayelekile, kunganikezwa njengamasampula mahhala. Kwabanye abadweba imidwebo, kufa i-carbide futhi kufa ngokunemba ngamakhasimende akhethekile adingekayo, kuzokhokhiswa. Vele, amakhasimende adinga ukukhokha imali yokuthumela. Imvamisa, isikhathi sokuhola samasampuli sizoba zingakapheli izinsuku eziyi-7 zokusebenza.
Ubuncane be-oda Ubuningi:Akukho ubuncane be-oda obuncane bokudweba okufayo, i-carbide iyafa nokunemba kufela i-oda lokuqala lesilingo. Kepha ku-oda lesibili, inani eliphelele lokudweba lifa, i-carbide ifa nokunemba kokufa akufanele kube ngaphansi kuka-1000 USD.
Incazelo ye-Drawing Die
I-GA10 14.4 92 1865 3600 5.9 14
Umkhiqizi weTonney Carbide Dies angamukela imikhiqizo eyenziwe ngezifiso ye-tungsten.
Isici Sokudweba I-Die
Igama lomkhiqizo: Ukudweba die / Precision die / Carbide Dies
Inombolo imodeli: I-DI
Uhlobo: Ukudweba die / Precision die / Carbide Dies
Izinto: Ingxubevange yeTungsten
Ibanga: GA10, RKG2, RKG3, RKG4
Ukucaciswa kohlelo lokusebenza lweDraw Die
Ukucaciswa kwe-GA10 kuyafa (Ubuningi bezinto zensimbi ye-tungsten: 14.4; I-HRA yezinto ze-tungsten alloy: 92)
Lolu hlobo lokufa ngokunemba lungasetshenziswa ekufeni kwesihloko njenge-big dia. umdwebo we-bube uyafa, ukwakheka kwe-powder kuyafa, i-nut ne-bolt iyafa.
RKG2 ukucacisa kuyafa (Ubuningi bezinto ze-tungsten alloy: 14.93; HRA yezinto ze-tungsten alloy: 90.2)
Ukufa okucacile kwe-RKG3 (Ubuningi bezinto zensimbi ye-tungsten: 14.61; I-HRA yezinto ezibonakalayo ze-tungsten alloy: 89.3)
Ukufa okucacile kwe-RKG4 (Ubuningi bezinto zensimbi ye-tungsten: 14.31; I-HRA yezinto ezibonakalayo ze-tungsten alloy: 89.2)
Lolu hlobo lokufa ngokunemba lungasetshenziswa ekufeni kwesihloko esibandayo njenge-big dia. umdwebo we-bube uyafa, ukwakheka kwe-powder kuyafa, i-nut ne-bolt iyafa.
Inzuzo yeDraw Die
Isitshalo seToonney tungsten carbide sisebenzisa ikhwalithi ephezulu ye-tungsten alloy ukukhiqiza umdwebo wokufa, i-carbide iyafa njalonjalo.
Ifektri ye-Toonney drawing die inesipiliyoni seminyaka engaphezu kwengu-10 sokukhiqiza kanye neqembu lobuchwepheshe lokuklama.
Umkhiqizi weToonney carbide ufa unaka kakhulu ukuthuthukisa ikhono lomkhiqizo wabo. I-Toonney carbide ifa ifektri isebenzisa imishini esezingeni eliphakeme kakhulu.
Ifektri iToonney ifa ifektri ingamukela i-oda elenziwe ngokwezifiso lomdwebo, i-carbide iyafa, ukucacisa okufayo njalonjalo.
Umkhiqizi we-Toonney carbide uyafa asebenza ngekhwalithi ephezulu ye-tungsten ene-good wear wear, ukuqina okuphezulu, nokuqina komthelela.
Langaphambilini Carbide Akunalutho
Olandelayo: Isihloko Sokufa